मलेसियाबाट ५ नेपाली सहित २ बङ्गाली लाई जबर्जस्ति स्वदेश फर्काईयो, एक नेपालीको अवस्था अज्ञात! - jagritikhabar.com
मलेसियाबाट ५ नेपाली सहित २ बङ्गाली लाई जबर्जस्ति स्वदेश फर्काईयो, एक नेपालीको अवस्था अज्ञात!
मलेशियाको एक कम्पनीमा कार्यरत करिब आधा दर्जन बढी नेपाली सहित बाङ्लादेशी कामदार लाई कम्पनीले जबर्जस्ति स्वदेश फर्काई रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
वगत महिना एनएसएल एस्टर्न प्रोटेच एस.डि.एन बि.एच.डी कम्पनीले को’भि’ड-१९ को समस्या देखाउदै न्युनतम तलब काटेपछि करिब २०० नेपालि श्रमिकहरु आम हडतालमा उत्रीएका थिए।
आम हडताल पछि नेपाली राजदुताबासको समन्वयमा श्रमिकहरु काममा फर्किएका थिए। तर पुनः सम्झौता बिरुद्ध तलब काटेपछि उनिहरु कम्पनीका प्रतिनिधि विरुद्ध उत्रिए पछि कम्पनी र कामदार बिच बिवाद सुरु भएको थियो।
कम्पनीमै कार्यरत नेपाली र बङ्गाली लाई कम्पनीले केहिदिन अघि मात्रै स्वदेश फर्काई दिएपछि रहस्य खुलेको हो। ५ नेपाली सहित बाङ्लादेशका २ नागरिक लाई कम्पनी बिरुद्ध आन्दोलन गर्न उक्साहट गरेको आरोपमा स्वदेश फर्काइएको छ।
नेपाल फर्काईएकाहरुमा चिरञ्जीवी नेपाल,नगेन्द्र चौधरी,राम कुमार खत्री,सुदिप सुबेदि रहेका छन। भने एक जनाको अवस्था अज्ञात रहेको बुझिएको छ। खत्रीको भने को’भिड-१९ सङ्क्र’म्ण देखिएकोले मलेसियामै छोडिएका छन।
समाचार श्रोतका अनुसार ३ नेपाली ८ बर्ष यता उक्त कम्पनीमा कार्यरत थिए। आफुहरुले पाउनु पर्ने हिसाब नदेखाई तलब बाटै टिकट खरिद गरि नेपाल फर्काइएको छ। यद्यपि सम्झौता अनुसार रोजगारदाताले ३ बर्षे करार अवधी सके पश्चात् टिकट उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)का दक्षिणपूर्वी एसियाका क्षेत्रीय निर्देशक डा पुनम खेत्रपाल सिंहले भारतमा कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरियन्ट भेटिएसँगै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
उहाँले विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ, “यसले सबै देशलाई निगरानी बढाउन, सतर्क रहन, कुनै पनि आयातलाई तीव्ररूपमा पत्ता लगाउन र भाइरसको थप फैलावटलाई रोक्न कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छ ।” उहाँका अनुसार भारतमा पहिलो पटक दुई जनामा ओमिक्रोन भेरियन्ट सङ्क्रमित पुष्टि भएको छ । उहाँले ओमिक्रोन भेरियन्ट कोरोनाको अन्य भेरियन्टजस्तै प्रतिकार्य गर्न सकिनेसमेत बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले व्यापक र अनुकूल जनस्वास्थ्य तथा सामाजिक उपाय तथा जनसमुदायबाट रोकथाम र सावधानीका उपायको कडा पालना गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले मानिसले आफ्नो नाक र मुख राम्ररी छोप्नुपर्ने र राम्रोसँग ठिक हुने मास्क लगाउनसमेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले खोप लगाएपछि पनि सबै सावधानी अपनाउन जारी राख्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
ओमिक्रोन भेरियन्टमा धेरै सङ्ख्यामा उत्परिवर्तन रहेका र तीमध्ये केही चिन्ताजनक रहेको भन्दै उहाँले विश्वभरका अनुसन्धानकर्ताले ओमिक्रोनको सर्नसक्ने गुण, गम्भीरता र प्रतिरक्षा क्षमताबारे राम्रोसँग बुझ्नका लागि अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।